एयरपोर्टको आवश्यकता बुझिएन ? - Pradesh Today
Homebreaking-newsएयरपोर्टको आवश्यकता बुझिएन ?
एयरपोर्टको आवश्यकता बुझिएन ?
प्रस्तुतिः जीतसागर जी.एम.
२०११ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको दाङको टरिगाउँ विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा सरकारले स्थान नदिए पन अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ । साढे सात सय मिटर कालोपत्रे धावन मार्ग भएको एयरपोर्टमा धावनमार्ग विस्तारलगायतको स्तरोन्नतीको अपेक्षा दंगालीले गरेका थिए ।
तर अपेक्षा अनुसारको काम नभए पनि सबै क्षेत्रबाट आलोचना बढ्दै गएको छ । तुलसीपुर छोडेर नयाँ ठाउँ एयरपोर्टको लागि सार्वजनिक भए पनि यो विषयले झनै चर्चा पाएको छ । यहि विषयमा रहेर जिल्लाका सरोकारवाला र विमानस्थल निर्माण गर्ने व्यक्तिका परिवारसँग प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेवल समेटेका छौं ।
नारायपुरको निर्णय स्वागतयोग्य
टरिगाउँ विमानस्थलमा धावनमार्ग पर्याप्त नभएकै कारण विकल्प खोजिएको हो । यद्यपि टरिगाउँ विमानस्थल पुरानो इतिहास बोकेको विमानस्थल हो । विकासको गति बढ्दै जाने क्रममा अहिले धावनमार्ग अपर्याप्त हुन थाल्यो ।
जसका कारण दाङमै उक्त विमानस्थलको विकल्प खोजिएको हो । टरिगाउँ विमानस्थललाई विस्तार गर्नुभन्दा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा खर्च लाग्ने देखिएपछि नारायणपुर विमानस्थलको विकल्प खोजिएको हो । संरचना बनेका छन्, टरिगाउँ विमानस्थलमा ।
ति संरचनाहरूलाई अन्य प्रयोजनमा लगाएर त्यहाँको विकास गर्न सकिन्छ । हामीलाई दाङको कुनै ठाउँमा पनि विमानस्थल भएमा दाङकै विकास हो जस्तो लाग्छ । नारायणपुर विमानस्थल विस्तार गर्ने काम अघि बढाउन सरकारको निर्णय राम्रो हो ।
हामीले उक्त निर्णयलाई स्वागतयोग्य नै भनेका छौं । संघ सरकारले बजेटमा नारायणपुर विमास्थललाई प्राथमिकतामा पारेको म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
नारायणपुर विमानस्थललाई अहिले आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारको निर्णय गलत होइन जस्तो लाग्छ । बजेटपश्चात् विभिन्न टिकाटिप्पणी आएका छन् । एउटै जिल्लामा पनि दुई ठाउँमा आन्तरिक विमानस्थल किन चाहियो ?
भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । मलाई के लाग्छ भने अहिले नारायणपुर विमानस्थलाई विकास गर्ने भनेको आन्तरिक विमानस्थलकै रूपमा विकास गर्ने हो तर भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि त्यो संरचना अहिलेदेखि नै आवश्यक छ ।
टरिगाउँ विमानस्थलमा त्यस्तो संचरना हुन नसकेका कारण अहिले उक्त विमानस्थलको काम अघि बढ्न सकेन । धावनमार्ग निर्माण गर्दा थुप्रै बस्ती विस्थापित हुने अवस्था आएको छ ।
त्यसकारण भोलि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड के हुन् ? ति कुरालाई मध्यनजर गरी नारायणपुर विमास्थलको काम अघि बढेको छ ।
आन्तरिक विमानस्थलबाटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुने भएका कारण सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको कुरा गलत होइन भन्न चाहन्छु । चर्चामा आउने तर काम हुँदैन् भन्ने होइन् भर्खर त शुरूवात गरेका छौँ । सरकारले पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गतवर्ष सर्वे लगायतका काम भइसकेको हुँदा यस वर्षदेखि आवश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
चुनौती मैले देख्दैन् बरू चुनौती सिर्जना गराउने गरिएको छ । विमानस्थलका कामलाई गति दिनका लागि बस्ती व्यवस्थापनका काम प्रक्रियागत ढंगबाटै अघि बढ्छ । ति कामहरू अब आगामी आर्थिक वर्षबाट बढ्ने पक्कै छन् । समस्या आउँछन् तर समस्या आउँछ भन्दैमा पछि हट्ने भन्ने कुरा आउँदैन् ।
नारायणपुर विमानस्थलको कामलाई द्रूतरूपमा अघि बढाउनका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण छ । भोलिको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पनासहित काम अघि बढ्ने हुँदा जग्गा पनि पर्याप्त रहेको छ ।
वर्तमान र भविष्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नारायणपुर विमानस्थलको परिकल्पना गरिएको हो ।
तुलसीपुरको विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रियभन्दा पनि आन्तरिक नै समस्या देखिन्छ । भौगोलिक संरचनामा प्राविधिक दृष्टिकोणले ठूला जहाज बस्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले नै विकल्प खोजिएको हो ।
दाङले दुई विमानस्थल पायो भनौं
सरकारले समयमै बजेट ल्यायो, यो सकारात्मक कुरा हो । तर टरिगाउँ विमानस्थलको सवालमा सरकारले धोका दिएको हो कि जस्तो लागेको छ । विषेशगरी तुलसीपुरबासी अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्नुको साटो सरकारले नयाँ ठाउँको विकल्प खोजेको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकल्प खोजिएको छ ।
विकास बजेटमा दाङको कुनै पनि ठाउँलाई नसमेटेको भए, छुट्टै कुरा हुन्थ्यो । तर नारायणपुर विमानस्थलाई आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनिएपछि तुलसीपुरबासी दुखी भएका छन् ।
पुँजीको आवश्यकता भइरहेको समयमा सरकारले अहिले भएका स्रोत साधनको प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन् ।
टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नती गरी ठूला जहाज अवतरण गर्ने सोंचका साथ हामीले थुप्रै प्रयास गरेका छौँ । गतवर्ष स्वयम् पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आएर उहाँले इन्धन डिपो स्थापना गर्ने बचनवद्धता व्यक्त गरिसकेपछि केही आशा पलाएका थिए ।
तर अहिले फेरि ति आशाहरू निराशामा परिणत भएका छन् । बजेट आइसकेपछि मन्त्रीज्यूसँग केही कुरा भएको थियो । उहाँले बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेपनि मन्त्रालयबाट केही बजेट पारिदिने प्रतिवद्धता पनि गर्नुभएको छ ।
हामीलाई लाग्छ कि दाङमा दुईवटा आन्तरिक विमानस्थल हुन्छन् कि ? यस अर्थमा फेरी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ ।
नारायणपुरमा विमानस्थल हुन लागेको पनि दाङलाई घाटा त होइन् । नारायणपुर विमानस्थल भयो भनेपनि हामी दंगालीका लागि राम्रो कुरा हो तर कामको थालनी हुनपर्छ ।
गत वर्षपनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थका रूपमा निर्माण गरिने कुरा निकै आयो तर काम हुन सकेन । अहिले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विमानस्थललाई समेटेको छ ।
तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने आम नागरिकलाई शंका छ । लिखितरूपमा आउने तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।
मलाई लाग्छ समय बलवान छ, नारायणपुरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा सरकारले त ल्यायो तर व्यवहारिक रूपमा चुनौती देखेका छौँ ।
गतवर्ष पनि नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर खबरहरू बाहिर आएपछि कतै समर्थन कतै विरोध पक्कै आएका हुन् । जसले गर्दा केही कठिनाइ छन् ।
तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थललाई संघ सरकारले स्तरोन्नती गर्न नसकेपछि हामी व्यवसायी, स्थानीय सरकार निर्धक्कसँग लाग्यौँ भने पक्कै पनि स्तरोन्नती गर्न सक्छौँ ।
स्तरोन्नती गर्दा लाग्ने अनुमान ५ अर्बको छ, तर नारायणपुर विमानस्थलको १६ अर्ब र २६ अर्बको दुईप्रकारका लागत अनुमान छ । यसले गर्दा पनि नयाँ ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्दाखेरी धेरै बजेट आवश्यक देखिन्छ ।
१६ अर्बमा नै भएपछि कहाँको ५ अर्ब र कहाँको १६ अर्ब ? धेरै नै रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । भएका संरचनालाई सदुपयोग गर्नुको साटो विकल्प खोजिनु पक्कै पनि राम्रो होइन् ।
नागरिकलाई विभाजन गर्ने निर्णय
सरकारले अहिले दाङका नागरिकलाई विभाजन गर्ने किसिमको निर्णय लिएको छ । दाङको नारायणपुर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने गत वर्ष सरकारले निर्णय गरेपछि हामीले स्वागत गरेका थियौँ ।
तर अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नारायणपुर विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने भनेर घोषणा गरेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
गतवर्ष पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले तुलसीपुरको महोत्सवमा टरिगाउँ विमानस्थलमा इन्धन डिपो स्थापना गरिने बताउनुभएको थियो । तर अहिले एक्कासी निर्णय परिवर्तन किन भयो ? म दाङ आएको छु, जनप्रतिनिधि तथा जनताको भावना बुझेको छु ।
मैले टरिगाउँ विमानस्थलको विकास गर्छु भन्नुभएको थियो । तर आज टरिगाउँको नामसम्म आउन नसक्दाखेरी हामी दुःखी भएका छौँ ।
एउटै ठाउँमा दुईवटा आन्तरिक विमानस्थल कसरी हुन सक्छन् ? अहिले यो विषय बहसको विषय बनेको छ । तुलसीपुर र घोराहीको दूरी टाढा पनि होइन् । त्यसैले एकै ठाउँमा दुईवटा आन्तरिक विमानस्थल हुन सक्दैन् ।
नारायणपुरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनिसकेको अवस्थामा किन फेरि आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनियो ?
दाङबाट नेतृत्व गर्नेलाई कमजोर बनाएर दाङको विकासलाई पछाडी पारिदै छ । हिजोको दिनमा खुमबहादुर खड्का, कृष्णबहादुर महराले दाङको विकासका लागि धेरै गर्नुभयो । तर अहिले दाङ कमजोर बनिरहेको छ ।
टरिगाउँ विमानस्थलाई आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा सञ्चालन गर्ने र नारायणपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गरेपछि दुई विमानस्थलको महत्व झल्किने थियो । अन्यथा अहिलेको अवस्थामा नारायणपुर विमानस्थल कसरी आन्तरिक विमानस्थल हुनसक्छ ?
बजेटमा दाङलाई सम्बोधन गर्ने नाममा दाङलाई विभाजन गर्ने किसिमको निर्णयप्रति सन्तुष्ट त छैनौँ तर नारायणपुर विमानस्थलको कामले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन् त्यो पनि शंका छ ?
नयाँ ठाउँमा विमानस्थलको काम गर्दा चुनौती पक्कै छ, तर काम गर्नैपर्छ । अहिले पनि सरकारले कागजमै सीमित ग¥यो भने फेरि हामी कराउनुपर्ने अवस्था नआवस् ।
धेरैले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पक्कै पनि विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढ्ने छ । विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउँदा फेरि पनि हामीले सोच्नैपर्ने कुरा केहो भने दीर्घकालिन आवश्यकता के हुनसक्छ ।
त्यसलाई मध्यनजर गरी नयाँ विमानस्थलको काम अघि बढाउनुपर्छ । अहिले तत्काल आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गरिएपनि भोलिका दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा लैजाने सोंचका साथ निर्माण गर्नुपर्छ ।
यदि त्यसो सकिदैँन भने तुलसीपुरकै टरिगाउँ विमानस्थलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । तर जे होस् तुलसीपुरमा इन्धनडिपो स्थापना गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुगोस् ।
नेतृत्वको ध्यान पुगेन
टरिगाउँ विमानस्थल बनाउने कुरामा आवाज उठ्ने तर व्यवहारिक रूपमा कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन् । विस २०१२ सालतिर स्थापना भएको विमानस्थल विभिन्न समयमा बन्द हुँदै सञ्चालनमा आउने गरेको छ ।
एयरपोर्टलाई गतिशील बनाउनका लागि त्यस समयमा हामीले निकै पर्यत्न गरेका हौँ । तर भइदिन्थ्यो के भने हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउने तर केही समयमै सरकार परिवर्तन भै हाल्ने गथ्र्यो ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार खत्रीको पालामा पनि हामीले विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने कुरामा निकै पहल गरेका हौँ ।
तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा पनि हामीले पहल गरिसकेपछि उहाँले एउट कन्सल्न्टेन्सीबाट दुईजना मान्छेलाई एक महिनासम्म यो एयरपोर्टको धावनमार्ग र दायाँ बायाँ पर्ने सबै क्षेत्र नाप गरेर एक महिनासम्म पनि मन्त्रालयबाट सिधै निर्देशन भएर यसको नापजोख गरियो ।
त्यसपछि एउटा प्रसंग के उठ्यो भने तुलसीपुरमा एयरपोर्ट स्थापना हुँदाखेरी नेपालगञ्जको हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भयो । किनभने तुलसीपुरमा विमानस्थल राम्रो हुँदा त तुलसीपुरले बढी लिन्छ मान्छेहरू भन्ने पनि भयो ।
त्यसले गर्दा पनि नेपालगञ्जले पनि नबनाउन चाहिरहेको एउटा कुरा छ भने भैरहवाको पनि त्यस्तै हो । जसले गर्दा पहिलेको अवस्थामा तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलमा राजनीतिक नजर पुग्न सकेनकी भन्ने सबैलाई लागेको थियो ।
त्यसपछि विमानस्थलको विकासले गतिलिन सकेन । पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट र जीवनबहादुर शाहीसम्म हुने बेलामा यसलाई चाहिँ केही बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको देखिन्छ ।
त्यो समयको परिस्थिति हेर्ने हो भने घोराहीको पनि तुलसीपुरमा नभए हुन्थ्यो भन्ने बु्झिन्छ । त्यसपछि बीचमा बनाऔँ कुरा आएपछि सरकारले एउटा बजेट भाषणमा वक्तव्य ल्यायो ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा ल्याएपछि मान्छेहरू बढी नारायणपुरतिर बढी केन्द्रित हुन लागेका हुन् । अनि नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो, त्यो कुरा पनि ठिकै हो किनभने जिल्लाभित्रैको विकास जहाँको राम्रो हो ।
यसलाई हामीले नराम्रो गरेको हो सरकारले भनेर भन्न मिल्दैन् । तर तुलसीपुरको विमानस्थलाई स्तरवृद्धि गर्ने कुरामा नेतृत्वको ध्यान अलि पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ, संघसंस्थाले पनि व्यवहारिक रूपमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन नसकेको कुरा देखिन्छ ।
तुलसीपुर विमानस्थललाई विकास गर्न लागि पछिल्लो समय यहाँबाट नेतृत्व गर्नेले अलि बढी ध्यान दिन नसकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।
खुमबहादुर खड्काको पालामा जे जति भयो त्यसपछि तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलले गति लिन सकेन् । पछिल्लो समय तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नो कामलाई व्यवहारिक बनाउन सकेन कि भन्ने लाग्छ ।
विमानस्थलको स्तरोन्नतीको लागि काम हुन लागेको भनेर मिडियाबाजी गर्ने तर व्यवहारिकरूपमा काम गर्ने सवालमा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका कमजोर नै देखेको छ ।
अब अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नारायणपुर विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनेपछि तुलसीपुरको विमानस्थल धरापमा पर्छ की भन्ने छ ।
अब यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्नेहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । नारायणपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गरी तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थललाई आन्तरिक विमानस्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
नेतृत्व कमजोर हँदा घाटा
सरकारले नारायणपुरमा विमानस्थल स्थापना गर्ने कुराले दंगाली जनतालाई खुशी थपिएको छ । एउटै जिल्लामा धेरै विमानस्थल सञ्चालन हुनु राम्रो भएपनि तुलसीपुरमा लामो समयदेखि सञ्चालमा रहेको विमानस्थलको स्तरोन्नतीमा ध्यान नपुग्नु सरकारको कमजोरी हो ।
सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले तुलसीपुरलाई भुल्न खोजेको जस्तो लाग्यो । करिब सात दशक लामो इतिहास बोकेको टरिगाउँ विमानस्थल पटक–पटक रोकिदैँ सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको नेतृत्व पछिल्लो समय विमानस्थललाई बिउँझाउने प्रयास भएपनि पछिल्लो समय उपेक्षित हुन राम्रो कुरा होइन ।
तत्कालिन स्थितिमा पनि तुलसीपुरमा हुन नदिनका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइन् । यद्यपि विमानस्थल स्थापना गर्न सफल भएको इतिहास साक्षी छ ।
स्थापना भएपनि धावनमार्ग पर्याप्त भएन भनेर विभिन्न समयमा जहाज नियमित हुन सकेन् । टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने समयमा नारायणपुरमा फेरि अर्को विमानस्थल स्थापना गर्ने कुराले फेरि तुलसीपुर तातेको छ ।
ग्वारखोला र चिरो भएका कारण धावनमार्ग विस्तार गर्न नसकिने बहानामा तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थल अन्यत्र लैजाने प्रयास भएको छ ।
तुलसीपुरमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गतिलो नहुँदा अहिले यो परिणाम भोग्नुपरेको छ । अरबौँको संरचना बनेका छन् । ति संरचनाको ख्यालै नगरी फेरि जनताबाट संकलन गरेको रकमको दुरूपयोग हुँदैछ । यसक्षेत्रका नागरिक पहिले सामाजिक काममा एकजुट हुने गरेपनि अहिले त्यस्तो पाइएको छैन् ।
अहिले नारायणपुरमा स्थापना गर्ने भनिएको विमानस्थलमा नयाँ निर्माण गर्दा थुप्रै चुनौती छन्् । त्यहाँ बसेको बस्तीका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिन्छ ।
तुलसीपुरबाट नजिकै किन अर्को विमानस्थल बन्दैछ भन्ने मेरो विरोध त होइन् त देखिन सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दा तुलसीपुरकै विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्न सक्नुपदथ्र्यो ।
मलाई लाग्छ पछिल्लो समय तुलसीपुरलाई नेतृत्वले भुल्न खोजेको हो । नेतृत्व सशक्त नबन्दाखेरी तुलसीपुरको विमानस्थल विस्थपित हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयस्तरमा केही प्रयास भएपनि केन्द्रस्तरमा तुलसीपुरको विकास निर्माणको सवालमा केहि देखिदैन् ।
भएको एउटा टरिगाउँ विमानस्थल पनि कमजोर स्थितिमा पुगेको छ । मेरा बाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा शुरूमा तुलसीपुरमा जहाज बसाउन सफल हुनुभएको थियो ।
त्यसपछि तुलसीपुरको विकासको सवालमा यसले धेरै सहयोग पु¥यायो । तर पछिल्लो समय घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरियो ।